वडाध्यक्षलाई आयो आफैँ म’रेको खबर ; जि’उँदो मान्छेलाई फेसबुकभरी श्र’द्दाञ्जली : – Sadhaiko Khabar
वडाध्यक्षलाई आयो आफैँ म’रेको खबर ; जि’उँदो मान्छेलाई फेसबुकभरी श्र’द्दाञ्जली :
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २३, २०७८ समय: २०:४०:२७
बागलुङ / जिल्लाको गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर १० पाण्डपखानीका वडा अध्यक्ष तिलक घर्तीको सामाजिक सञ्जालमा मृ’त्युको खबरले धेरै जना आश्च’र्यचकित र स्त’ब्ध भए। स्वंयम् नगरपालिकाकै कर्मचारीहरु पनि अक’ल्पनीय खबरबाट वि’क्षिप्त बने।
मृ’त्युमा सं’शय राख्दै शनिबार दिउँसो ३ बजे गलकोट नगरपालिका स्वास्थ्य संयोजक मिनराज गैरेले अध्यक्ष घर्तीको मोबाइलमा फोन गरे, फोन उठ्यो। ‘तिलक सर बोल्नुभयो ?, तपाईँ ठीकै हुनुहुन्छ सर ?’ गैरेले प्रश्न गरे। अध्यक्ष घर्तीले आफू सकु’शल रहेको जवाफ दिए।
गैरेले लामो श्वास फेर्दै खुशी लागेको प्रतिक्रिया दिएपछि ‘किन के भयो र ?’ भनेर अध्यक्ष स्वयमले प्रतिपश्न गरेका थिए। जवाफमा गैरेले फेसबुकमा उनको मृत्युको खबर देखेर झस्किँदै फोन गरेको बताएपछि अध्यक्ष घर्ती छाँ’गाबाट ख’सेजस्तो भए।
गरैको फोन लगत्तै अध्यक्ष घर्तीलाई देश तथा विदेशबाट फोन आउन थाल्यो। उनलाई फोन गरेका अधिकांशले सोधे ‘तपाईँ तिलक हो, सञ्चै सकुशल नै हुनुहुन्छ ?’
गलकोट अपडेट र गलकोट बागलुङ नेपाल फेसबुक पेजबाट अध्यक्ष घर्तीलाई श्र’द्धाञ्जली दिइएको थियो। ती दुवै फेसबुक एकाउन्टमा ‘निष्ठुरी दैव, तँलाई नि राम्रै मान्छे चुन्नु पर्ने ? गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर १० पाण्डवखानीका वडा अध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्रिय मगर संघ जिल्ला अध्यक्ष समेत रहनुभएका तिलक घर्तीजीप्रति हार्दिक श्र’द्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ । रेस्ट इन पिस। शो’काकुल परिवारलाई धै’र्यधारण गर्ने श’क्ति मिलोस्’ लेखिएको थियो।
साँझ मात्रै त्यो पोस्ट देखेपछि अध्यक्ष मगरले आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट मार्फत आफू सकु’शल रहेको जानकारी गराएका छन्।
‘केही मित्रले जे सोच्दै हुनुहुन्थ्यो, भगवानको कृपाले त्यो अहिले नै नहोस्, आखिर जन्मसँगै मृ’त्यु सत्य छ। केही मित्रजनबाट मेरो बारेमा मृ’त्यु पर्यन्त दिइने सद्भाव प्रकट गर्नु भएको रहेछ’, उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मेरो शुभचिन्तक आफन्त तथा सम्पूर्ण साथीहरूमा यो ग’लत भएको र म सकु’शल रहेको जानकारी गराउँदछु।’
केही दिनदेखि हावाहुरीले गर्दा फोन इन्टरनेट अब’रुद्ध भएको हुँदा सामाजिक सञ्जाल हेर्न नपाएको र फोन समेत गर्न नसकेको भन्दै पछि त्यो पोस्ट देख्दा आफूलाई निकै दुःख लागेको अध्यक्ष घर्तीले बताए।
अध्यक्ष घर्तीले आफूलाई कुनै पनि स्वास्थ्य सम’स्या नभएको र गाउँमै काम गरेर रहेको बताए। झु’टो खबरले आफ्ना आफन्त र शुभ चिन्तकहरुमा अ’सर पुगेको भन्दै आफूले यस विषयमा जिल्ला प्रह’री कार्यालय बागलुङमा जानकारी गराएको र आइतबार साइबर अ’पराधमा उ’जुरी दिने सोचमा रहेको अध्यक्ष घर्तीले बताए।
गलकोट अपडेटसहित दुवै पेज चलाउँदै आएका विशाल क्षेत्रीले ग’म्भीर कम’जोरी भएको स्वीकार गर्दै क्ष’मा या’चना गरेका छन्। ‘आज म आफैसँग ल’ज्जित छु। मैले हतार गर्दा, मेरो हतारको ग’ल्तीले धेरै जनालाई हा’नि गरेको छ’, उनले भने, ‘म कुन शब्दले क्ष’मा मा’गुँ ? मसँग त्यो शब्द छैन।’ – अन्न’पुर्ण पो’ष्टबाट ।